Nzou Kurova Chitima muIndia RayHaber
mushaTHE WORLDASIA91 IndiaNzou Kurova Chitima muIndia
01 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 91 India, ASIA, THE WORLD, Railway, GENERAL, musoro wenyaya, VIDEO 0
india chitima njanji hove fishnet carrii
Nzou Kurova Chitima MuIndia. MuIndia, chitima chinomhanya-mhanya chakarova tarenji inofamba pane njanji. Nzou, yakakuvara zvakanyanya nemhedzisiro, yakaenda musango iine nzira yayo. Tsaona yakaitika muJalpaiguri, North Bengal.
Chitima chaipfuura paBanarhat-Nagrakata chabuda mudunhu reWest Bengal, India, chakabayiwa netara ichifamba munzira. Kza 27 Njodzi yaSeptember yakaitika pa8.30. Vhidhiyo yenzou yakarohwa nechitima yakakonzera kusuwa kukuru pasocial media. Muvhidhiyo ye45-yechipiri, zvinoonekwa kuti nzou, yaiona vanhu vachipererwa, yaive nenguva yakaoma yekusimuka kubva pasi nekufamba zvishoma nezvishoma kukwira mudondo. Injini chikamu chechitima chemutyairi chakasarudzika uye mutyairi anonzi akakuvara pakupera kwekurovera.
Mukadzi Akarongedzwa Nenzira muElazığ Yakarasika Upenyu Hwake 27 / 03 / 2018 Iyi njodzi yakaitika pakati peElazığ neKızılay. Edinilen kuenda kuchipatara, 2 amai vevana XMUM wemakore X vane Velvet Steel, vachiedza kupfuudza chitima kubva kuSiteshi cheGare gare gare Harput, vachitakura gypsum teresi vakarova chitima. Vasingazivi kuti vanorova mukadzi uye mutoro kudzokera kumaawa e53 mushure mekudzoka ma mechanics, nzira dzezvitima dzakaona kuti mukadzi uyu haana muviri. Pamusoro peizvi, makaniki anoshevedza hutano nemapoka emapurisa pachiitiko. Zvirwere zvemakirini zvinobva munzvimbo yechiitiko chacho zvakasarudza kuti simbi. Chirwere chepachigaro chekuongorora mapoka anoshandisa kuvhara kwechigumbu chemuviri wenyama isina upenyu nhasi
Akakuvadzwa Munhu Akakuvadzwa Nenzira Muna Kayseri 09 / 07 / 2012 MuKayeri, munhu akabatwa nechitima. Zvichikuvadzwa munhu pangozi, akabudiswa kuchipatara mushure mekurapa. MA munharaunda yeMelikgazi Bağpınar musha wainzi munhu, akatora mhuka kuti adye. MA pamucheto wemigwagwa, MA, Kayseri, Sivas, mutungamiri wehutungamiri hwe IT ndokurova chitima chakakundwa. Munhu akakuvara pangozi munhu akakuvara, Kayseri Training and Research Hospital. Mushure mekurapwa kwake, akabudiswa. Ihofisi yehupisiti yakatanga kuongorora uye chirevo chevanhu vaibatanidzwa munjodzi vakatorwa. BT yakabudiswa mushure mekutaura kwake. Kunobva: www.haberimport.com
MuDenmark, mhou ye14 inorohwa nechitima chakakwirira 02 / 10 / 2012 Denmark kwakaita Jutland guta kumavirira Varde ari mbudo iri mhou vakapukunyuka kubva purazi pedyo njanji nemupristi-nokukurumidza chitima yarova 14 mhou vakaparara. St. Michael Skaarup kubva mapurisa dhipatimendi, nzira zvino kudzidzisa chikamu yemombe, akatiza akakuvadzwa apo mumwe chikamu akati yakaparara mukati imwe kure, "Pashure tsaona Varde uye chitima basa pakati Skjern guta hazvina kuitwa kwenguva refu. The chitima yarova mhou pamwe muridzi kuchengeta kuverenga, uye vari kuwarira pamusoro hombe munzvimbo mushumo kuti mhou tsvina kubviswa mutoo akatora chinguva chiduku. Muridzi wemombe akabatwawo zvikuru uye akagumbuka zvikuru. Asi mhou Ancak
Vakakuvadzwa Nenzira Muna Van | Dzidzira kuparara 16 / 11 / 2012 Mumwe mwana akakuvara muchitima chechitima muBostaniçi, Van. Kapıköy muna Saray muruwa Border Gate raipinda TCDD mitoro chitima, maawa TCDD DE 13.00 macho mitoro nezvitima achitungamirirwa EU kuitira 53032, achipfuura Bostaniçi uyai, kuridza pamusoro njanji 3-makore yakarohwa Rukan Kuruç kuti. Vana vakakuvadzwa, nevagari venharaunda yeYalım Erez District 10 Nolu Family Health Centre yakabviswa. Pashure pekupindira kwekutanga, RK yakatorwa kuVan Regional Training uye Research Hospital ine ambulensi. Mapurisa mazhinji akatumira kunzvimbo yacho mushure mokunge pangozi yacho, asi hama dze mwana uyu
MuElvankent, Ankara, munhu anorohwa nechitima chakakwirira 23 / 12 / 2012 Ahmet Tire (54), uyo akadzoka kubva kunzvimbo dzekutengesa pachiteshi chezvitima cheElvankent muAnkara, akarasikirwa noupenyu hwake pasi pechikepe chepamusoro-chepamusoro kubva kutungamiri Eskişehir. Vavakidzani vagari, nzvimbo chete yakachengeteka munharaunda yekuyambuka mumugwagwa unoenda kumucheto kwenzira inozadzwa nemvura, saka vafambi vanofamba nenhamo, akadaro. Pasinei nekushevedza kwaA ASKİ, uyo akataura kuti mvura iri mumucheto wakaderera wevagari vomunharaunda, ivo vakaratidza zvavakaita kuitika. Mhedziso: HaberTurk
Basa Rekudzikisa Zviitiko zvechitima paBatman Diyarbakır Railway
Mukadzi Akarongedzwa Nenzira muElazığ Yakarasika Upenyu Hwake
Akakuvadzwa Munhu Akakuvadzwa Nenzira Muna Kayseri
MuDenmark, mhou ye14 inorohwa nechitima chakakwirira
Vakakuvadzwa Nenzira Muna Van | Dzidzira kuparara
MuElvankent, Ankara, munhu anorohwa nechitima chakakwirira
High-speed mota inorohwa nevechidiki vakakuvara muAnkara
Mutyairi weCar Akaumbwa neVadzidzi Vanofa
MuAnkara, murume wekare akakunda chitima chakavhurika
1 inourawa nezvitima kuMaltepe ruwa rweIstanbul
Vakarasikirwa noupenyu hwehupfungwa